Waggaa 50ffaa presidaantiin Ameerikaa duraanii John F KennedynItti ajjeefaman yaadatamee oole
Xurree ittiin seenan
Gara gabaasaatti darbi
Gara fuula ijootti deebi'i
Gara barbaadduutti cehi
Tarree gabaasaalee sagaleedhaan
Oromiyaa I Itoophiyaa
Tamsaasa Guyaadhaa Guyyaa
Ibsa Gulaalaa Mootummaa Yunaaytid Isteets
VOA Afaan-Oromoo Audio Tube
Sagantaa as dhihoo
Sagantaa itti aanu
Oduu Afaan Oromoo
Ameerikaa fi Uummata Ishee
Sadaasaa 22, 2013
WASHINGTON, DC — Qorarannaa hawaa geggeessuun ilaalcha duraa kan president John Kenndy ture.
Jalqaba irratti akeeki merkurii qorattoonni hawaa keessa akka socho’an taasise. San boodas namni yeroo jalqabaaf ji’a irra akka eggetu dandeessisee jira.
Katleen Kennedy intala obboleessa John Kennedy kan robert Kennedy ti. Milkaa’ina John kennedy akkas jechuun ibsan.
Dhimmi isaa maalan iraa argadha? oolmaa maalii soof oolu isa jedhu utuu hin taane, hojichi hojii ulfaataa waan ta’eef hojjetamuu qaba isa jedhu.
Namni ji’a irra akka deemu dandeessisuun ulfaataa dha. Kanaaf injineroota waan hin danda’amne akka danda’amu gochuu qabna jedhan qabna. Sana yoo goone qormaata keessa hin dabarre hin qabnu yaada jedhu sammuu lammiiwwan Ameerikaa keessa kaa’e.
Presidenti Kennedyn yeroo aangoo irra turanitti lammiiwwan America hidda dhalata Afriikaa baraoota isaan qabsoo mirga namaa itti finiinsan ture. Presidentichi ajjeefamuu isaanii baatilee haga tokko dua kongresiin US seeraawwan mirga namaa akka baasan dhiibbaa gochaa turan.
Gaaffiin fuula keenya dura jiru gaaffii namummaa ti. Gaaffiin kun akka barreeffama dheeraa kan ture si’a ta’u heera Ameerikaa irras taa’ee jira. Bu’uurri isaa lammiiwwan Ameerikaa mirgaa fi carraa qixxee ta’e haa argatan kan jedhu jedhan kennedyn.
Gabaasaa Guutuu Armaa Gaditti Caqasaa
Feesbuukii irratti dabarsi
Twiterii irratti dabarsi
Yaadawwan Ilaali (1)
This forum has been closed.
Yaada dabalataa fe'adhu
Gabaasa Baayyee Dubbifame
Maqalee Irratti Jimaata Har’a Haleellaan Gaggeeffamee Jira
Haleellaa Wallaggaa Baha fi Naannoo Isheetti Raawwatameen Lubbuun Namootaa Baduun Gabaasame
Haleellaa humna qilleensaa naannoo Maqaleetti geggeessame jedhame qulqulleeffachuuf qorataa jira: Tokkummaan Mootummootaa
Koreen Dhimmootii Alaa Yunaayitid Isteetis Itiyoophiyaa Ilaalchisuun Murtii Ejjennoo Dabarse
Mootummaan Itiyoophiyaa guyyaa sadaffaadhaaf haleellaa xiyyaara waraanaa raawwate
Oromiyaa I Itiyoophiyaa
Sagantaa Raadiyoo fi Friikuweensiilee
Akkaataa Fayyadamaa fi Imaammata Gulantaa